Home - DVB TV News
16815 January 4, 2018
15850 January 4, 2018
18920 December 19, 2017
21017 December 14, 2017
ရဲမှူး အယောင်ဆောင်ပြီး ရပ်ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကို ငွေလိမ်လည်မှုတွေ ဖြစ်ပွား
26283 November 19, 2017
ရဲမှူး အယောင်ဆောင်ပြီး၊ ရပ်ကွက် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှုးတွေကိုသာ သီးခြားလိမ်တဲ့ ငွေကြေး လိမ်လည်မှုတွေ ပဲခူးတိုင်း အနောက်ခြမ်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားတာပါ။ DVB TV – 19.11.2017
စီးတီးတက္ကစီ တွေကို မှတ်ပုံတင် လိုင်စင်နက်တွေကို ကျပ်မတ်ပေးသင့်
25787 November 17, 2017
စီးတီးတက္ကစီ တွေကို မှတ်ပုံတင်နေရပေမယ့် လိုင်စင်အနက်နဲ့မောင်းနေတဲ့ ယာဉ်မောင်းတွေပါ ကျပ်မတ်ပေးသင့်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီသတင်းကို စိုးယုဇော်ကပေးပို့ထားပါတယ်။ DVB TV – 17.11.2017
ရုပ်သံလိုင်း ၅ခု ရုပ်သံထုတ်လွှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူဖို့ စာချုပ်ချုပ်ဆို
25621 November 17, 2017
ရုပ်သံလိုင်စင်ရ ကုမ္ပဏီငါးခုဟာ နိုဝင်ဘာလ (၁၇)ရက်နေ့မှာ ရုပ်သံထုတ်လွှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းတွေ ၀ယ်ယူဖို့ သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာချုပ်အရ ရုပ်သံလိုင်စင်ရထားတဲ့ ကုမ္ပဏီးငါးခုဟာ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားမှတဆင့် အခမဲ့ ရုပ်သံလိုင်းတွေထုတ်လွင့်ဖို့ စီစဉ်နေတာပါ။ လက်ရှိမှာ ရုပ်သံ လိုင်းတွေအနေနဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေ ရာခိုင်နုန်းတော်တော်များများ ပြီးဆုံးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အပြီးသတ် စာချုပ်ဖြစ်တဲ့ မြန်မာရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ တရားဝင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့အတွက် ၂၀၁၈ နှစ်ဆန်းပိုင်းလောက်မှာပဲ ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။ တရားဝင် ရုပ်သံလွှင့်ခွင့်လိုင်စင် ရရှိထားတဲ့ ကုမ္ပဏီးငါးခုကတော့ DVB၊ Mizzicma KMA တယ်လီဟိုဒင်းနဲ့ Fortune မြန်မာနဲ MY မီဒီယာဂရုတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ DVB TV – 17.11.2017
26148 November 17, 2017
အသုဘ အခေါင်း ရွာထဲကသယ်မယ့်ကိစ္စ ရွာအရှေ့ခြမ်းနဲ့ အနောက်ခြမ်း အချင်းများ
26171 November 17, 2017
ကျုံပျော်မြို့နယ် ဇင်ပြွန်းကုန်းရွာမှာ အသုဘ အခေါင်းကို ရွာထဲကသယ်မယ့်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရွာအရှေ့ခြမ်းနဲ့အနောက်ခြမ်း အချင်းများနေပါတယ်။ ဒီသတင်းကို စိုးမိုးအောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်။ ရိုက်ကူး – မြမင်းဦး DVB TV – 17.11.2017
4590 October 30, 2017
5110 October 27, 2017
သူ့ရဲ့ဘ၀ သူ့ ဂီတ သူရည်ရွယ်ထားတဲ့သူအကြောင်းတွေကို ဖွင့်ပြောထားတဲ့ Mary ရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေနဲ့အတူ ကလေးစာပေ ထွန်းကားမှုကနေ လူငယ်စာပေ ဖြစ်တည်မှုအလားအလာ သုံးသပ်တင်ပြချက်တွေကို ခုတပတ် လူငယ့်အသံ အစီအစဉ်မှာ ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ “Mary က အဓိကကတော့ ဦးဏှောက်ထဲမှာ story တခုကို စဉ်းစားပြီးတော့ စပ်ဖြစ်တာများတယ်… music တခုအနေနဲ့တော့ Mary သတ်မှတ်လို့မရဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Mary က အေးအေးလေးတွေဆိုတယ် တချို့တွေသဘောမကျရင် ဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့ ပုံစံလေးတွေဆိုဖြစ်တယ်…” “Mary က ငယ်ငယ်လေးကတည်းက တဦးတည်းသောသမီး.. ဟိုမှာက အမေနဲ့ကြီးခဲ့တယ်ဆိုတော့ ဘ၀မှာ အားကိုးရတဲ့ ယောက်ျားလေးတယောက်ကို Mary အရမ်းလိုချင်တယ်.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ အမေနဲ့နှစ်ယောက်ထဲ ကြီးလာရတာကိုး.. Mary အားကိုးရမယ့်သူ ယုံကြည်ရမယ့်သူ Mary …Read more »
4965 October 27, 2017
5233 October 24, 2017
2981 October 20, 2017
အလွန်အမင်း ငါးဖမ်းတာတွေနဲ့ ပင်လယ်ပြင်မှာ ဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းတာတွေကြောင့် မြန်မာ့ရေပိုင်နက်ထဲမှာ ရေသယံဇာတတွေ လျော့နည်းလာနေပါတယ်။ မြိတ်မြို့က ရေလုပ်ငန်း တွေအကြောင်းကို Close-up အစီအစဉ်မှာ အနီးကပ်တွေ့မြင်ကြရမှာပါ။ DVB TV – 20.10.2017
2828 October 20, 2017
ပညာရေးကို အလေးပေးလာနေတဲ့ ပညာခေတ်ကြီးထဲမှာ လူငယ်တွေ ဘယ်လို ရုန်းကန်နေကြရသလဲ၊ အဆင့်မြင့်ပညာရေးအတွက် ဘယ်လမ်းကြောင်းတွေကို ရွေးချယ်လျှောက်လှမ်းနေသလဲ၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ ဘာတွေသိထားဖို့ လိုအပ်မလဲ စတဲ့ ပညာရေးဆိုင်ရာ သုံးသပ်တင်ပြချက်တွေကို ခုတပတ် လူငယ့်အသံ အစီအစဉ်မှာ ရှုစားသွားရမှာပါ။ ဆယ်တန်းအောင်ရင် ဘယ်လမ်းရွေးမလဲ ငယ်စဉ်ကတည်းက ပညာရေးရည်မှန်းချက် ကြီးမားပေမယ့် မပြေလည်တဲ့ ဘ၀အခြေအနေ၊ တပိုင်တနိုင်အိမ်တွင်းအကြော်စုံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ မိသားစုလေးဘ၀ကနေ ရုန်းကန်ကြိုးစားပြီး ထူးချွန်ခဲ့တဲ့ လူငယ်တွေကို ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာသာ တွေ့ဖူးမြင်ဖူးကြမှာပါ။ တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀ထဲမှာတော့ အခြေခံအလွှာ မိသားစုထဲကနေ ရုန်းကန်ကြိုးစားရင်း (၁၀)တန်းမှာ (၄)ဘာသာဂုဏ်ထူးနဲ့ ထူးချွန်အောင်မြင်ပြီး ဆေးကျောင်းအမှတ်မှီနေတဲ့ နယ်မြို့လေးတခုက ကျောင်းသားလေးတယောက်ရဲ့ ဘ၀ပုံရိပ်ကိုလည်း တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ လူငယ့်အသံ အစီအစဉ်ကို သောကြာနေ့တိုင်းမှာ အသစ်တင်ဆက်ပြီး စနေ၊ တနလာင်္နဲ့ ဗုဒဟူးနေ့တွေမှာလည်း ပြန်လည် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ လူငယ့်အသံရဲ့ …Read more »
3080 October 20, 2017
3176 October 20, 2017
2587 October 18, 2017
DVB TV – ချောင်းဆုံမြို့နယ်မှာကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲရှုံးနိမ့်ခဲ့ခြင်းဟာပါတီအတွင်းမညီညွတ်မှုကြောင့်ရှုံး
1976 April 25, 2017
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မှာ တရွာလုံး ကိုယ်စားပြုပြီး တဖွဲ့ထဲက မဲမပေးဖို့ ကြီးကြပ်သွားမယ်
2060 March 28, 2017
၂၀၁၇ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ကြိုတင်မဲတွေ စတင်ပေးနေ
1678 March 28, 2017
မဲဆန္ဒရှင် သက်သေခံလက်မှတ်တွေကို နေအိမ်အထိ လိုက်လံ ပေးပို့ပေးနေ
1528 March 27, 2017
ပါတီကိုကြည့်ပြီး မဲပေးခဲ့လို့ ဒုက္ခတွေ ဖြစ်နေတာလို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ဟောပြော
2808 March 26, 2017
DVB TV – မဲဆန္ဒရှင်သက်သေခံလက်မှတ်တွေကို ရပ်ကျေးကော်မရှင်းမှာ စတင်ထုတ်ပေး
1522 March 18, 2017
DVB TV – ရယ်ရမောရ သတင်းလောကအစီအစဉ်
4364 February 27, 2017
2809 February 21, 2017
DVB TV – ရယ်ရမောရလောက အစီအစဉ်
2299 February 20, 2017
3501 February 13, 2017
2854 February 6, 2017
DVB TV – ရယ်ရမောရသတင်းလောက အစီအစဉ်
3025 January 30, 2017
DVB TV – နယ်စပ်စစ်ရှောင်စခန်းကကလေးငယ်တွေရဲ့ရင်ထဲကခံစားမှု ရေးဆွဲတဲ့ပန်းချီ
1440 March 18, 2017
DVB TV – နယ်စပ်စစ်ရှောင်စခန်းကကလေးငယ်တွေရဲ့ရင်ထဲကခံစားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ပြသရေးဆွဲထားတဲ့ပန်ချီကား၆၀ကိုမြစ်ကြီးနားမြို့ စီတာပူ ရပ်ကွက် UC F ကွင်းမှာပြသနေတာပါ။ ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါ်သင်းသင်းနွယ်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။
DVB TV – ကွဲပြားခြားနားမှုနဲ့ သဟဇတ ဖြစ်မှုပြည်သူ့နီတိစာအုပ်
1600 March 11, 2017
DVB TV – ကွဲပြားခြားနားမှုနဲ့ သဟဇတ ဖြစ်မှုဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့( CDNH ) က ထုတ်ဝေထားတဲ့ ပြည်သူ့ နီတိ စာအုပ်တွေနဲ့ပက်သက်ပြီး လုံးဝ လက်ခံစဉ်းစားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောပါတယ်။ စိုးယုဇော် ပေးပို့ထားပါတယ်။
DVB TV – ရန်ကုန်က စာအုပ်လမ်းဖွင့်လှစ်လာတာ ၂ လ ပြည့်ပြီ
1272 March 6, 2017
DVB TV – ရန်ကုန်က စာအုပ်လမ်းဖွင့်လှစ်လာတာ ၂ လ ပြည့်ပြီဖြစ်ပြီး မကြာခင် ယာယီပိတ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးပိုင်စိုး သတင်းပေးပို့ထားတာပါ။
DVB TV – မြန်မာ့ဇာတ်သဘင်လောကရဲ့ အခြေအနေဟာ နိမ့်ကျလာနေတဲ့အတွက် အစိုးရကိုယ်တိုင်ပါဝင်ကူညီဖို့ လို
2388 March 6, 2017
DVB TV – မြန်မာ့ဇာတ်သဘင်လောကရဲ့ အခြေအနေဟာ နိမ့်ကျလာနေတဲ့အတွက် အစိုးရကိုယ်တိုင်ပါဝင်ကူညီဖို့ လိုတယ်လို့ ဘဘင်လောကသားတွေက ပြောပါတယ်။ ဦးပိုင်စိုး သတင်းပေးပို့ထားတာပါ။
DVB TV – ဖန်တီးရေးသားခြင်း၏ တံခါးပေါက်များ နှင့် ဝင်္ကပါလမ်းများ စာပေအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
1210 March 4, 2017
DVB TV – ဖန်တီးရေးသားခြင်း၏ တံခါးပေါက်များ နှင့် ဝင်္ကပါလမ်းများ ဆိုတဲ့ ဖန်တီးရေးသားမှုဆိုင်ရာ စာပေအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို အခုလ ၃ ရက်နေ့ကစပြီး ရန်ကုန်မြို့မှာ ကျင်းပနေပါတယ်။ နေရီရီပေးပို့ထားပါတယ်။
1690 February 20, 2017
DVB TV – စာအုပ်တန်းမှာ လမ်းလျှောက်ခြင်းအစီအစဉ် ဒီတပတ် စာအုပ်တန်း အစီအစဉ်အတွက် အစိုးရဝန်ထမ်းဘဝ နိုင်ငံရေးသမားဘဝ အတွေ့အကြုံတွေအပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကာလတွေမှာ အတူဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို ရေးထားတဲ့ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းရဲ့ ရေဆန်လမ်းမှ အိမ်အပြန် စာအုပ်အကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
နောက်ကြောင်းပြန်ဝေဖန်ရေးမလုပ်ဖို့ မီဒီယာကို ဦးခင်ညွန့် သတိပေး
57834 June 22, 2015
ပရိသတ်တွေအရမ်းကြားချင်နေတဲ့ သီချင်းတပုဒ်နဲ့ ဖျော်ဖြေချင်သူ
37489 April 15, 2015
သင်္ကြန်အကျနေ့ ကန်တော်ကြီး အိုင်စီရှိုးကို လူတသိန်းကျော် လာရောက် အားပေး
34990 April 14, 2015
မျှော်စင်ကျွန်းမှာ အိုင်စီသင်္ကြန် ဘယ်လိုကြိုခဲ့ကြသလဲ
34363 April 13, 2015
အစုိုးရတပ်နဲ့ တုိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ တုိုက်ပွဲတွေ အရေအတွက်တုိုး
34223 April 20, 2015
သင်္ကြန်အကျနေ့ ရန်ကုန်မြို့ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမပေါ်က မြင်ကွင်း
32135 April 14, 2015
မန္တလေး မီးလောင်မှု အိမ်ခြေ၂၀ကျော်ဆုံးရှုံး လူ၂ဦး ဒဏ်ရာရ
31041 April 20, 2015
စားဖုို့ မသင့်တဲ့ အစားအသောက် ရောင်းချသူတွေကုို အရေးမယူသေး
30751 April 27, 2015
နောက်ဆုံးရ ဒီဗွီဘီ သတင်းများ
ကာတွန်း – ညီပုချေ
The post ကာတွန်း – ညီပုချေ appeared first on DVB.
အမေရိကန်တွင် လိင်ပြောင်းထားသူအများစုကို စစ်မှုထမ်းခွင့် ပိတ်ပင်
လိင်ပြောင်းထားသူအများစုအား စစ်မှုထမ်းခွင့်ပိတ်ပင်တဲ့ ညွှန်ကြားချက်ကို အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။[...] The post အမေရိကန်တွင် လိင်ပြောင်းထားသူအများစုကို စစ်မှုထမ်းခွင့် ပိတ်ပင် appeared first on DVB.
ဆိုင်ကယ်လိုင်စင် ဈေးနှုန်း ဖြေလျှော့ပေးသင့်ကြောင်း ပဲခူးတိုင်းလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ပြော
ပြည်သူတွေ အဆင်ပြေစေဖို့ ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်ဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်နေမှုကို ဖြေလျှော့ပေးသင့်တယ်လို့ ပဲခူးတိုင်းလွှတ်တော် ဒုဥက္ကဋ္ဌက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရေးအတွက် ခူးတိုင်းအတွင်း[...] The post ဆိုင်ကယ်လိုင်စင် ဈေးနှုန်း ဖြေလျှော့ပေးသင့်ကြောင်း ပဲခူးတိုင်းလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ပြော appeared first on DVB.
ဘိုကိုဟာရမ်အဖွဲ့ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်သည့် ကျောင်းသူ ၁၀၇ ဦးကို နိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတ တွေ့ဆုံ
နိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတ မိုဟာမက်ဒူ ဘူဟာရီဟာ ဘိုကိုဟာရမ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့က ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ ကျောင်းသူ ၁၀၇ ဦးကို တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ သမ္မတ[...] The post ဘိုကိုဟာရမ်အဖွဲ့ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်သည့် ကျောင်းသူ ၁၀၇ ဦးကို နိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတ တွေ့ဆုံ appeared first on DVB.
ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုဖြင့် အီရန်နိုင်ငံသား ၉ ဦးနှင့် ကုမ္ပဏီတခုကို အမေရိကန် တရားစွဲ
အမေရိကန်က အီရန်နိုင်ငံသား ၉ ဦးနဲ့ အီရန်ကုမ္ပဏီတခုကို ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက် တရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုက အမေရိကန်တက္ကသိုလ် ၁၄၄[...] The post ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုဖြင့် အီရန်နိုင်ငံသား ၉ ဦးနှင့် ကုမ္ပဏီတခုကို အမေရိကန် တရားစွဲ appeared first on DVB.